Fitaovana Convair Model 7002 XF-92A FSX & P3D
Ity no fiaramanidina elatra vita amin'ny elatra amerikana voalohany, tamin'ny nandehanany ny volana avrily 1948, ny Convair XF-92 noheverina ho toy ny fiaramanidina mpiady dia nijanona ho fanandramana ihany koa, ny modely 3D amin'ity add-on dia kalitao tsara, kalitaon'ny virtoaly virtoaly miaraka amin'ny refy misy tena izy ary 3D click-spot ary tonga lafatra ny feo. Ny vokatry ny "after-burner" dia tsara ihany koa. Mirakitra soratra efatra. mifanaraka Prepar3D v4 +
Zava-dehibe: Tsy maintsy apetraka ny XMLTools mba hananana ny vokatry ny "G" sy ny "AoA" mba hiasa.
XMLTools for FSX/P3D tsy v4:
Ny Convair XF-92 no fiaramanidin'ny zotra amerikana voalohany. Natao voalohany ho mpitsabaka fiarovana eo an-toerana ny orinasa, ary nofaranana fotsiny ny fanandramana. Na dia izany aza, ny drafitra azo tsoahina dia nanampy an'i Convair mba hampiasa ny elatry ny delta amin'ny modely maromaro, anisan'izany ny Delta Dagger F-102, ny Delta Dart F-106, ny B-58 Hustler, ny F2Y Sea Dart ny Navy, tahaka ny XFY fanandramana. (Wikipedia)
Downloads 8 258
Milton Shupe, Rick Mackintosh, Brian Alexson, Scott Thomas, Hans-Joerg Naegele, Jan Rosenberg, Nigel Richards, Sarin'i Jan Visser sy Tire textures nataon'i Mike Kelly